FREE TIMES: အနာဂတ်အတွက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ (2) အဆင်ပြေပါစေ
အနာဂတ်အတွက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ (2) အဆင်ပြေပါစေ
သူငယ်ချင်းတွေ ကိုလည်းမြတ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုနှလုံးသွင်းတတ်စေပြီး ဘ၀ကိုရိုးရိုးသာသားရှုမြင်တတ်သူ
တွေအဖြစ်နဲ့ပဲရပ်တည်သွားစေချင်တာပါ။ တစ်ယေက်နဲ့တစ်ယောက်ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင်ကြွားဖို့ဝါဖို့လုပ်နေရင်းနဲ့ ပဲ အချိန်တွေမကုန်စေချင်ဘူး။အ၀တ်စားနဲပက်သက်ပြီး ထပ်ပြောပါရစေအုံး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သုံးလောကထွဋ်ထားမြတ်ဘုရားရှင်ဟာ သုဿန်တစပြင်က အ၀တ်ဟောင်းတွေကို တစ်စဆီချုပ်ပြီးသပ္ပယ်စွာဝတ်ရုံလို့ လောကကြီးကောင်းကျိုးအတွက် သာသနာတော်ကို မိုးထဲရေထဲနွေနေပူထဲမှာ မနားတမ်းပြုသွားခဲ့တာပါ ။အင်မတန်လေးစားကြည်ညိဖို့ကောင်းသလို အင်မတန်လေးစားအားကျအတုယူထိုက်ပါတယ် ။တကယ်ဆိုရင် မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာ ဘုန်းတော် အနန္ဒ တန်ခိုးတော်အနန္ဒ ဖြစ်လို့ အကောင်းဆုံးသော အ၀တ်တန်ဆာကိုသာ ဆင်မြန်းရမှာပါ ။ မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်လည်း တန်ခိုးတော်နဲ့ အကောင်းဆုံးသောအဆင်တန်ဆာတွေကို ဖန်ဆင်းလို့ရပါတယ် ။ဒါပေမယ့် မြတ်စွာဘုရားဟာ လောကဓံတရားကိုတန်ခိုးနဲ့ ဖြတ်မကျော်သွားပါဘူး ကြမ်းတမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့ မုယောစပါးတွေကိုတောင် ဘုဉ်းပေး သုံးဆောင်ပြီး ဘ၀ကိ်ုသဘာဝကျကျ လက်တွေ့ကျကျ ပဲဖြတ်သန်းသွားခဲ့ပါတယ် ။
ဒီလောက်ဆိုရင် ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောထားကိုသိလောက်ပါပြီ။ ဘ၀ကို ပကာသနတွေနဲ့ထုံးမွှမ်းပြီး ဘ၀င်မမြင့်သွားစေချင်ဘူး။ မြတ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့ထုံးမွှမ်းပြီး ဘ၀မြင့်စေချင်တာပါ။
(လေထဲမှာ) ဗုဒ္ဓံသရံဏံ ဂစ္ဆာမိလို့ ပါးစပ်ကရွတ်နေပြီး ဗုဒ္ဓရဲ့ လေးစားထိုက်တဲ့ဂုဏ်တွေ ကိုမကြည်ညိုတတ်ရင် ဗုဒ္ဓရဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ အဆုံးအမတွေကို မနာခံတတ်ရင် ဗုဒ္ဓံသရံဏံ ဂစ္ဆာမိ ဆိုတာ လေထဲရောက်သွားရုံပဲအဖတ်တင်မှာပါ။
(မမွဲဘူး)သိန်းတစ်ထောင်ထီ ပေါက်တာကကံအကြောင်းတရားမလှရင်မွှဲသွားနိင်ပါသေးတယ် မြတ်ဘုရားရဲ့ အဆုံးအမတွေကို ခံယူထားတဲ့သူကတော့ ဘ၀သံသရာတစ်လျောက်လုံးဘယ်တော့မှ မမွှဲတော့ပါဘူး....ချမ်းသာပြီးရင်းချမ်းသာလာတော့မှာပါ ။
(ပကာသန) လူတွေဟာ စစ်မှန်တဲ့ ဂုဏ်တွေကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး ပကာသနဂုဏ်တွေနောက်ပဲလိုက်နေကြတယ် ။
(ဗုဒ္ဓဘာသာ ) လာစမ်းပါ ..စမ်းကြည်စမ်းလို့ ရဲရဲတောက် ဖိတ်ခေါ်ရဲတဲ့ တရားစစ်တရားမှန်တွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ မှာပဲရှိတယ် ။ ဝေဖန်ခွင့် ..စိစစ်ခွင့်ရှိတဲ့ ၀ိဘဇ္ဇ၀ါဒီ ပါ။ ရမ်းယုံကန်းယုံနေတဲ့ လမ်းဆုံဝါဒီမဟုတ်ဘူး။ (law of reflection) လောကကြီးဟာ မှန်တစ်ချပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့ စေတနာအလင်းတန်းတွေဟာ တစ်နေ့ကိုယ်ဆီတန်ပြန်လာမှာပါပဲ ။
ဘယ်တော့မှမလွှဲပါဘူုးlaw of reflection နိယာမအတိုင်းပေါ့ ။
(ပယ်ဖျောက်ထား) ဘ၀ကိုအထက်တန်းကျကျပျံသန်းချင်ရင် မာနကြီးတာတွေ ဘ၀င်မြင့်တာတွေကို အရင်ဆုံးပယ်ဖျောက်ထားမှဖြစ်မယ် ။
(အခြေခံ) မေတ္တာတရားနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားတို့သည် အောင်မြင်ကြီပွားခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းသာယာခြင်းတို့ကို အခြေပြုထား၏ ။
(ဘ၀ရဲ့သီအိုရီ) သဘာဝတရားဆိုတာ ဘ၀ရဲ့သီအိုရီပါ။ ဘ၀ရဲ့သီအိုရီကို ကျွမ်းကျင်နားလည်မှသာ ဘ၀နဲ့ပက်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြေရှင်းတွက်ထုတ်နိုင်မှာပါ။
(အာရှတိုက်ရဲ့လင်းရောင်ခြည် ) အတိတ်ကသယ်ဆောင်လာခဲ့သည့်ုဒုက္ခဆင်းရဲများကိုလည်း ငြိမ်းချမ်းစေ၏ လက်ရှိပစ္စက္ခမှ ပူပင်ဆင်းရဲမူများကိုလည်းပြေပျောက်စေ၏ နောင် အနာဂါတ်အတွက်လည်း အနိုင်းမဲ့ချမ်းသာစေနိုင်၏ ဤအရာကား အခြားမဟုတ်ပေ။ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်၏ ၀ိပဿနာတရားမြတ်ပင်ဖြစ်၏ ။
(လက်တွေ့ရှိပါစေ ) သုတတွေမှာရပ်မနေပါနဲ့ ကြံစည်စဉ်းစားသုံးသပ်ဝေဖန်လိုက်ပါအုံး ... ပြီးရင် ..လက်တွေ့ကျကျ လုပ်ဆောင်ကြည့် ။
(တန်းတူ) လူဖြစ်ပြီး လူလိုမှမသိတတ်ရင် လူလိုမှနားမလည်ရင် ခွေးတွေတရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ တန်းတူဖြစ်သွားမယ်။
(ဖြစ်မှာပဲ) ပြုတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ င်္သခတနယ်ထဲမှာ ကောင်းတာပဲလုပ်လုပ် ဆိုးတာပဲလုပ်လုပ် ဖြစ်မှာပဲ .... ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့ အကျိုးခံစားရမယ် မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးခံစားရမယ် မကောင်းတာလုပ်ပြီးမှ " အဖေ ကယ်ပါအုံး " ဆိုပြီး အယူခံဝင်လို့မရဘူး.. ဖြစ်မှာပဲ ။
(အမြတ်) ယူပြီးပြန်သွားတဲ့လူတွေက သံသရာမှာအမြတ်မရှိဘူး ပေးပြီးပြန်သွားတဲ့လူတွေက သံသရာမှာအမြတ်ရှိတယ် ။
(၀မ်းသာပါ) မနာလိုမူတွေများတဲ့လူရဲ့ ဘ၀ဟာ ဘယ်တော့မှမချမ်းသာပါဘူး ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပြီးပြည့်စုံနေရင်တောင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာက အမြဲတန်းမနာလိုမူတွေနဲ့ ပူလောင်နေရမှာပါ။ တကယ်ချမ်းသာချင်ရင် ၀မ်းသာမှဖြစ်မှာပါ။ "၀မ်းသာမှ ချမ်းသာမယ်လေ".. (Universal truth) အခြားမှန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အယူဝါဒတွေဟာ သဘာဝတရားနဲ့ထပ်တူမကျလို့ မှန်တာတွေက အမှားဖြစ်သွားနိုင် တယ် မြတ်ဗုဒ္ဓ ဟောဖော်ပြခဲ့တဲ့ သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားက သဘာဝတရားစစ်စစ် ပရမတ္ထဖြစ်နေလို့ မှန်ပြီးရင်းမှန်နေတယ် .... အမြဲတန်းမှန်ကန်နေတယ် Universal Truth !
(မဂ္ဂင်လမ်း) ဘ၀ရဲ့အတွေအကြုံတွေ ဘယ်လောက်ပဲရင့်ကျက်နေပါစေ.... မြတ်ဘုရားရဲ့ မဂ္ဂင်လမ်းပေါ် မလျှောက်နိုင်သေးသရွေ့ ဘ၀ရဲ့အတွေအကြုံတွေဟာ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ နေတုန်းပါပဲ ။
(မလွယ်ဘူး) အရေပြားပေါ်မှာထိုးထားတဲ့ ဆေးမှင်ကြောင်က ဖျက်ပစ်ဖို့လွယ်ရင်လွယ်အုံးမယ် ... နှလုံးသားမှာထိုးထားတဲ့ အပါယ်လေးဘုံက ဖျက်ပစ်ဖို့မလွယ်ဘူး ..။
. (မနိမ့်ဘူး) အဆိုးဆုံးသော အခြေအနေတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့ အရည်အချင်းတွေဟာ မနိမ့်ပါဘူး ..
(ကြီးမားတဲ့ အကုသိုလ်) မိဘကျေးဇူး မဆပ်နိုင်သေးတာက ကြီးမားတဲ့အကုသိုလ်မဟုတ်ဘူး မိဘ စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်လိုက်တာက ကြီးမားတဲ့အကုသိုလ်... အသိအခါခါပွားလို့သတိရင်မှာထားပြီးနေ..။
(ယုံကြည်ချက် ) သူတစ်ပါးကိုယ်ကို ယုံတာ မယုံတာက အရေးမကြီးပါဘူး... ကိုယ်ဘ၀ကိုယ် ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်.. "ယုံကြည်ချက်အားကောင်းမှသာ အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်နိုင်မှာလေ"။
(ဘ၀နဲ့သူတော်ကောင်းတရား) အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ဘ၀ကိုပိုင်ဆိုင်ချင်ရင် သူတော်ကောင်းတရားကိုလက်ကိုင်ထားပြီး ကြိုးစားရုန်းကန်ပါ ။ ဘ၀ဆိုတာ ရုန်းကန်ခြင်းပဲလေ ... ဒါပေမယ့် အဓိပ္ပါယ်တော့ရှိစေချင်တယ် ။
(သည်းခံပါ) အမြတ်ဆုံးဘ၀ကိုရချင်ရင်သည်းခံပါ အငြိမ်းချမ်းဆုံးဘ၀ကိုရချင်ရင်သည်းခံပါ အအောင်မြင်ဆုံးဘ၀ကို ရချင်ရင်သည်းခံပါ (အချိန်မရွေး) လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် လူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒိဌိ မကွာနိုင်သေးဘူးဆိုရင် မျက်စိမှိတ်ပြီးလမ်းလျှောက်နေတာနဲ့အတူတူပါပဲ ... အကုသိုလ်ကြီးကြီးမားမားတွေကို အချိန်မရွေး ခလုတ်တိုက်မိသွားနိုင်တယ်။
(ဘုရားသဘောကျအောင်နေ) ဘယ်သူတွေဘာပဲပြောပြော ဘုရားသဘောကျအောင်သာနေပါ ဘုရားသဘောကျအောင်နေတတ်မယ်ဆိုရင် လက်ရှိပစ္စက္ခဟာ အငြိမ်းချမ်းဆုံးပေါ့။
(လမ်း) လမ်းလျှောက်နေရင်းနဲ့တော့လမ်းမပျောက်ပါဘူး လမ်းမလျှောက်တော့မှသာ လမ်းပျောက်သွားမှာ ပါ လမ်းမပျောက်ချင်ရင် လမ်းလျှောက်ပါ။
(မတော်တဆ) မတော်တဆဆိုတာ သတိမရှိတဲ့သူတွေဆီမှာပဲဖြစ်ရတာ ... သတိရှိနေတဲ့သူတွေဆီမှာမတော်တဆဆိုတာ မရှိဘူး ဘ၀မှာ မတော်တဆတွေမဖြစ်ချင်ရင်သတိရှိရှိနေပါ ။
(စာဖတ်ပါ) မိဘကဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီး ကျောင်းထားပေးတာ စာတတ်ဖို့ .....စာတွေဖတ်တတ်ဖို့ပါ။ စာတွေတတ်ပြီးစာမဖတ်ရင် မိဘကျေးဇူးစော်ကားနေတာနဲ့အတူတူပဲ ဒါကြောင့် ...စာဖတ်ပါ။
(အမှန်တရား) အမှန်တရား ကိုတန်ဖိုးထားပါ အမှန်တရားကို မြတ်နိုးသွားပါ အမှန်တရားကိုလက်တွဲထားပါ ဒါမှ ....ကိုယ့်ဘ၀ဟာ အမှန်တရားနဲ့ထပ်တူကျမှာ....။
(တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်) အချိန်ကိုလေးစားတယ်ဆိုရင် ကုသိုလ်ကို တန်ဖိုးထားပြီးနေပါ။ ကုသိုလ်တွေများပြီးကုန်သွားတဲ့ အချိန်တွေကသာ တန်ဖိုးရှိနေတာကိုး .......။
(မြတ်သောစိတ်) အတ္တနဲ့ယှဉ်ပြီးယူနေတဲ့ စိတ်ကမမြတ်ဘူး ဒါန နဲ့ ယှဉ်ပြီး ပေးနေတဲ့စိတ်ကမြတ်တယ်..
.. (နားလည်မူ) လောကမှာ နားလည်မူဆိုတာ ဘ၀ရဲ့အရေးကြီးဆုံးထွက်ပေါက် .... "သတ္တ၀ါမှန်သမျှ နားမလည်လို့ ဒုက္ခရောက်နေကြတာ " (ရေလှူပါ) ချမ်းသာချင်ရင် မြတ်စွာဘုရားကို သောက်တော်ရေ ပုံမှန်လှူပါ ။ မှတ်ချက်။ ။ မြတ်စွာဘုရားကိုသောက်တော်ရေလှူသည့်အခါ ကြည်ညိုလေးစားမူ သဒ္ဓါတရားအပြည့်နှင့်ကပ်လှူပါ။မိမိကပ်လှူလိုက်သည့် သောက်တော်ရေခွက်ကို မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင် ယူဆောင်သောက်သုံးတော်မူပြီး သောက်တော်ရေခွက်အားတဖန်ပြန်စွန့်လိုက်သည့်အချိန်ထိအာရုံကူး၍ လူဒါန်းပါ။ ထိုအာရုံကိုပဲ နှလုံးသားထဲမှာ ငါးမိနစ်လောက်ပွားများပေးပါ။ သဒ္ဓါတရားရဲ့ ကြည်လင်အေးမြမူကို ကိုယ်တွေ့ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ မိမိတတ်နိုင်တဲ့ စေတနာ နဲ့လှူဒါန်းလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကိုကြည့်ပြီး ဖြစ်တည်နေတဲ့ ပီတီစိတ်တွေဟာလည်း အင်မတန်အေးချမ်းနေပါလိမ့်မယ်။ ဖြစ်တည်ခဲ့တဲ့စေတနာတွေဟာလည်း ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးအကျိုးပေးဖို့ စောင့်မျော်နေပါလိမ့်မယ်။ ဘ၀မှာဆင်းရဲတယ်ဆိုတာမလှူတတ်လို့ဆင်းရဲနေရတာပါ။လှူတတ်ရင်မဆင်းရဲတော့ပါဘူး ။ သက်တော်ထင်ရှားမြတ်ဘုရားကို အာရုံကူးပြီးလှူဒါန်းတဲ့ ရေ အလှူဟာအင်မတန်အကျိုးကြီးပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရေဆိုတာလူသားအားလုံးအတွက်မရှိမဖြစ် အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်နေတာကိုး။ "ရေအသက်တစ်မနက် "ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားလည်းရှိတယ်လေ ။အသက်သခင်လည်းဖြစ် ၊ဆေးတစ်ပါးလည်းဖြစ်တဲ့ ရေကို သဒ္ဓါတရားထက်သန်စွာနဲ့ လှူတတ်မယ်ဆိုရင် အကျိုးတရား ဟာအင်မတန်ကြီးမားပါတယ် ။ဒီနေသိသွားရင် ဒီနေ့လှူစေချင်ပါတယ်။သူငယ်ချင်းတွေကိုချမ်းသာစေချင်တာကိုး။
(ဖြစ်ပါစေ) ကိုယ်တတ်ထားတဲ့ အတတ်ပညာတွေ ကိုယ်သိထားတဲ့အသိပညာတွေဟာ လောကကိုအလှဆင်နိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါစေ။ " မြင့်မြတ်သောသူတို့သည် လောကအား ပေးဆပ်သွားခဲ့ကြ၏ ယုတ်နိမ့်သော သူတို့သည် လောကထံမှ ရယူသွားခဲ့ကြ၏ " မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသော အဘိဏှသုတ်မှ ကမ္မဖလ(၅) " ကောင်းသည်လည်းဖြစ်သော မကောင်းသည်လည်းဖြစ်သော အကြင်ကံကိုပြုအံ ထိုကောင်းမူမကောင်းမူ၏ ကောင်းမွေဆိုးမွေသည်ဖြစ်ရအံ " ဤသို့နေညမမြတ်ဆင်ခြင်အပ်၏ ကမ္ဘာပေါ်မှဖြစ်ပွားခဲ့သမျှ ရှိရှိ သမျမျှ ပူပန်သောကရောက်စရာဟူသမျှတို့သည် သူယုတ်မာတို့ကြောင့်သာဖြစ်ပွားခဲ့မြဲဓမ္မတာ.. သူတော်ကောင်းများနှင့်လားလားမှဆိုင်ချေ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာတွေရှိသမျှ ရက်စက်သောပက်စက်သော မြင်ကွင်းများသည်ပညာနည်းသူတို့၏ အမိုက်မှောင်ထုအတွင်းမှာသာ ဖြစ်ပွားတွေရှိရစမြဲ .. ပညာကြီးသူတို့၏ ဥာဏ်အလင်းရောင်အောက်မှာ ထိုအနိဋ္ဌာအာရုံများဖြစ်ရိုးထုံးစံမရှိချေ။.......................................................................
* လောကဓံမကင်းတဲ့ သံသရာတလင်းမြေမှ မရေမတွက်
နိုင်တဲ့ သံသရာသူငယ်ချင်းတွေအားလုံး ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။
ပထမတင်ထားတဲ့ပို့စ် ပါ ဒီမှာသွားရောက်ဖတ်ရူနိုင်ပါတယ်။
ချခင်းသူ Unknown at 8:47 AM